အပြောင်းအရွှေ့ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
အပြောင်းအရွှေ့	Posted by mm thinker on December 27, 2008
Posted in: Announcement.	Tagged: Announcement.	11 Comments
ဒီ ဖရီးဟို့စ်ပေါ်မှာ WordPress နဲ့ ရေးနေတာကို ရပ်ပြီး WordPress ရိုးရိုးပေါ်မှာပဲ ဘလော့ဂ် ဆက်ရေးပါမယ်။ mmfreethinker.wordpress.com နဲ့ လာရင် ရောက်ပါတယ်။ လိပ်စာမပြောင်းပါဘူး။ ဘလော့ဂ် အသစ်မှာ မြန်မာယူနီကုဒ်စည်းကမ်းကို အတတ်နိုင် ဆုံးလိုက်နာထားတဲ့ ဖောင့်တွေ (myanmar3, ပုရပိုဒ်၊ ပိတောက်) စတဲ့ ဖောင့်တွေနဲ့ပဲ ရေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်အဟောင်းမှာ ယခင်ကအတိုင်း ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ဆက်ရှိနေပါမယ်။ ကျနော့် ဘလော့ဂ်ကို ဖတ်မရရင် ယူနီကုဒ်ဖောင့် ထည့်ကြဖို့ အားနာနာနဲ့ပဲ တိုက်တွန်းပါတယ်။
← A Note on the Development of the Burmese Language	Ananda Thuriya’s Death Song (1) →	11 comments on “အပြောင်းအရွှေ့”
kom on December 27, 2008 at 6:23 pm said:
Reply	Blogger Lay on December 27, 2008 at 8:46 pm said:
Reply	Aye Myat Myat Ko on December 29, 2008 at 8:24 pm said:
Reply	sin dan lar on December 30, 2008 at 8:05 am said:
Reply	မသက်ဇင် on January 5, 2009 at 7:47 am said:
Reply	ttt on January 6, 2009 at 4:20 pm said:
Reply	ကေမောင်ငြိမ်း on January 12, 2009 at 11:53 pm said:
ပထမတစ်ခါ ဆရာဦးငွေဆီက တကူးတက မေးမြန်းပြီး ဘလော့မှ တင်ကြည့်ပါတယ်။ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ဘလော့လည်သူတွေ ဖောင့်မမြင်ကြတော့ လာမလည်ကြတာနဲ့ ပြန်ဖြုတ်ထားမိတယ်။ အခုတစ်ခါ ဒုတိယံမိ တင်ကြည့်ပြန်ပြီ။ ဒီတစ်ခါလည်း ဘယ်လောက်ကြာမယ် မသိဘူး၊ ဘလော့တွေ ၁၀၀မှာ ၃၀ လောက်ဆိုရင်တောင်မဆိုးဘူး။ လိုက်လည်လို့ရသေးတယ်။ အခုတော့နည်းတော့ ဘယ်လို သွားလည်ရမှန်းတောင် မသိဘူး။ ကိုယ်ဆီလည်း မလာကြတော့ဘူး။🙂
Reply	linn hlyan hlaine on January 13, 2009 at 7:49 pm said:
Reply	linn hlyan hlaine on January 13, 2009 at 8:02 pm said:
Reply	မသက်ဇင် on March 17, 2009 at 2:05 am said:
Reply	Kyaw Lu Thar on April 13, 2009 at 10:53 am said: